भक्तपुरमा बाढीपहिराेकाे कहर: बस्ती डुब्याे, तीनको ज्यान गयो (फाेटाे कथा) | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
भक्तपुरमा बाढीपहिराेकाे कहर: बस्ती डुब्याे, तीनको ज्यान गयो (फाेटाे कथा)
असार २८, २०७५ बिहिबार १८:५:१ | उज्यालो सहकर्मी
भक्तपुर - अविरल परेको वर्षाका कारण हनुमन्ते खोलामा आएको बाढीले भक्तपुरको चारैवटा नगरपालिका क्षेत्रमा विनास गरेको छ ।
बाढीले बस्तीहरु डुबानमा पार्नुका साथै पहिरो र बाढीका कारण मानवीय क्षति हुनुको साथै घर, टहरा, गोठ, पशुपंक्षी, चौपाया बगाएको छ । यहाँका हजारौं बासिन्दा बिचल्लीमा परेका छन् ।
राति तीन बजेदेखि बस्तीमा पानी पस्न थालेको र बिहानसम्म घरबाहिर निस्कन नसकेपछि सुरक्षाकर्मीको टोली बिहानैदेखि उद्धारमा खटिएको थियो ।
नगरकोट, वागेश्वरी, छालिङ्ग, ताथली र काभ्रेको बनेपादेखि बगेको आएको पानीको एकमात्र निकासको रुपमा रहेको हनुमन्ते खोलामा बाढी उर्लिए पछि बस्ती डुबानमा परेका हो ।
डुबान र क्षति यस्तो भयो:
हनुमन्तेको बाढी बस्तीमा पसेपछि भक्तपुर नगरपालिकाको हनुमान घाट, बाराही क्षेत्र, सिर्जनानगर, सल्लाघारी, जगाती, लिवाली क्षेत्रका सयौं घर डुबानमा परेका छन् ।
यहाँका टहरा र माटोका घरहरु भत्किएका छन् भने जगाती स्थित सिद्धिस्मृति अस्पताल डुबानमा परेको छ । डुबानका कारण अस्पतालको उपचारमा प्रभावित पार्नुको साथै आकस्मिक कक्ष बन्द भएको छ ।
यहाँका प्राबिधि सामानहरुमा समेत क्षति पुगेको अस्पतालका प्रमुख श्यामसुन्दर धौभडेलले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरि डा. इवामुरा अस्पताल डुबानमा पर्दा आकस्मिक सेवालगायत उपचार प्रभावित भएको र प्राबिधिक सामानहरुमा क्षति पुगेको अस्पतालका व्यबस्थापक रंजित मारिखुले जानकारी दिनुभयो । भक्तपुरको राम मन्दिर र यहाँसंगैको शान्ति निकेतन मावि डुबानमा पर्दा यहाँको पढाई बन्द भएको छ ।
त्यसैगरी मध्यपुरथिमि नगरपालिका क्षेत्रका कमेरोटार, राधेराधे क्षेत्र, एसएस चोक, शंखधर साख्वा चोक, दक्षिण बाराही क्षेत्र र निकोसेरा क्षेत्र पुरै डुबानमा परेको छ । जमिन सतहबाट आठ फिट माथिसम्म पानी आएपछि विशेष गरि भुईंतला घरमा बस्नेहरुको सुरक्षाकर्मी र नेपाल रेडक्रस सोसाईटी भक्तपुरको टोलीले उद्धार गरेको छ ।
रातिदेखि नै पानी बस्तीमा पसेपनि बिहानीपख भने बस्तीमा पानीको सतह बढ्दै गएको थियो । यहाँका बासिन्दाको भुईतलाको सामानहरुमा क्षति पुगेको छ ।
बहुतले घरका मानिस बाहिर निस्कन नसक्दा कार्यालय, व्यबसाय र विद्यालय जाने मानिसहरु घरमै रोकिए भने भुईतलासम्म डुबानमा परेपछि त्यहाँका बासिन्दालाई उद्धार गरेर सुरक्षित स्थान तर्फ लगिएको थियो ।
सूर्यविनायक नगरपालिका क्षेत्रको सिरुटार, बालकोट, कटुञ्जे क्षेत्रमा बाढी पसेर विनाश गरेको छ । कौशल्टार पुलमा बाढीले क्षति पुर्याएको छ भने बालकोट, कौशल्टार, सागबारी, कटुञ्जे क्षेत्रका माटोका एकतले घर, टहराहरु बगाएको छ ।
गोठहरुसँगै गाई, बंगुर, कुखुरा, बाख्राहरु समेत बगाएको छ । बाढीका कारण मानविय क्षति नभएपनि भौतिक क्षति र पशुपक्षीको क्षति भएको तर के कति संख्यामा क्षति भयो भन्ने यकिन तथ्यांक आइनसकेको प्रहरीले बताएको छ ।
मध्यपुर अस्पताल, एसएस कलेज, सिबर्ड कलेज, अक्सफोर्ड स्कूल, ग्लोरी स्कूल डुबानमा परेको छ । डुबानमा परेका बस्तीका बासिन्दालाई नेपाली सेना, प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीको टोलीले उद्धार गर्नुका साथै बोट संचालन गरेर सुरक्षित स्थानमा पुर्याएको थियो ।
यहाँका बासिन्दा दिउँसो अबेरसम्म पनि सहज रुपमा बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । बजार समेत डुबानमा परेकाले सयौ व्यापारीको खाद्यान्न, ईलेक्ट्रोनिक्स, ईलेक्ट्रिकल्स सामानहरु र भाटभाटेनी सुपर मार्केटका सामानहरु क्षति पुगेको छ । डुबान क्षेत्रका एक दर्जन विदालयहरु बन्द भएको छ ।
यता मनोहरा सुकुम्वासी बस्ती पुरै डुबानमा परेको छ । जडिबुटी स्थित मनोहरा खोला किनारामा रहेको सुकुम्वासी बस्ती पुरै डुबानमा पर्दा यहाँका बासिन्दाले राती १ बजेदेखि जागा बस्नु परेको स्थानीयले बताएका छन् ।
बाढीपहिराेकै क्रममा भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका –७, मझुवा टोलमा पहिरोले घर पुर्दा सुतिरहेका हजुरबुवा, हजुरआमा र नातिनीको मृत्यु भयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टका अनुसार ६९ वर्षीय हिरा लामा, उनकी श्रीमती ६२ वर्षीय पानमाया लामा र तीन वर्षीया नातिनी सम्पदा लामाको मृत्यु भएको हो ।
अन्तिम अपडेट: माघ ३, २०७५
July 14, 2018, 6:09 a.m.
बस्ती धेरै हुनु र समय मै ढल निकासको ख्याल नगर्नुले हो /
१५ फोटोमा हेर्नुहोस्, कसरी छाडिन्छ नदीमा गोही ?
फागुन ३, २०७५ शुक्रबार
पराई भएकी मायालुको याद मुटुभरि !
फागुन २, २०७५ बिहिबार
रानीझरनामा छाँगाबरोहण सुरु
बैंक गतिबिधि : एभरेस्ट र वेष्टर्न डेभलपमेन्टको नाफा बढ्यो, एनआइसी र मितेरीको घट्यो
साउन १८, २०७५ शुक्रबार
पशुपति शर्माले युट्यूबबाट किन हटाए ‘लुट्न सके लुट कान्छा’ ?
काठमाण्डाैमा ४ रेक्टर स्केलको भूकम्प: कीर्तिपुर केन्द्रविन्दु
पाँचथरकाे छुट्टाछुटै ठाँउमा परेको चट्याङ लागेर १ जनाको मृत्य...
राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा मेचीकाली विश्व अभियानको उद्घाटन
लन्ली प्लानेट भन्छ: काठमाण्डाै विश्वकै पाँचौ घुम्नलायक सहर, ट्रा...
आठौं राष्ट्रिय खेलकुद फेरि अनिश्चित
आईएफबीबी प्रो कार्ड जित्दै विनिता राई बडी बिल्डिङको ओलम्पियाका...
भक्तपुरमा चट्याङ्गमा परेर वनभोज गएका ६ जना विद्यार्थी घाइते
सडकमा कष्टकर जीवन बिताउने नागरिकलाई पाल्न तयार छौँ: मुख्यमन्त्...
'पुलवामा' हमलाबारे आफैले दिएको अभिव्यक्तिका कारण 'द कपिल शर्...
गण्डकी प्रदेशको पहिलो वर्ष : थोरै सकियो धेरै प्रक्रियामा
रक्सी खाएकाे भन्दै आफ्नै बाबुको हत्या गरेकाे आराेपमा पक्राउ प...
बारा घटना रहस्यमय बन्दै: घाइते प्रजिअ र मृतक प्रहरी उपरीक्षकका...
अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई प्रधानमन्त्रीले भने: ब्याजदर घटाउनुस्, मैल...
बाँदर समाउन भारतबाट आएका शिकारीलाई खाेटाङमा स्वागत
'काठमाण्डौको तीनकुनेबाट ग्यास निकाल्ने प्रक्रिया सुरु भयो'
बेलायतबाट भागेर आईएस लडाकू बनेकी गर्भवती किशोरी घर फर्किन चाहन्छिन् !
सरकारकाे एक वर्ष, ठूला गफ चुट्नमै व्यस्त
माघ २९, २०७५ मंगलबार
अहिले मिडिया नै लोकतन्त्रको लागि खतरा बनिरहेको छ
जाडोमा भक्का : चामलको पिठोको मिठो परिकार
होमस्टे नम्बर १३